एजेन्सी- आम रुपमा महिलाहरु पुरुषसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छन् । कुनै पनि पुरुषसँग नजिक हुँदै गरेकी महिलाको चाहना रोमान्स वा लामो सम्बन्ध स्थापित गर्ने नै हुन्छ । तर, अध्ययनले के देखाएको छ भने सबै महिला रोमान्स वा जीवन साथीको रुपमा मात्रै पुरुषलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने हुँदैन । हरेक चार जना महिलामध्ये एक जना महिला भने रोमान्स वा लामो सम्बन्धभन्दा पनि सित्तैमा विभिन्न परिकार खान पाइन्छ भन्ने लोभमा पुरुषसँग नजिक हुने र डेटमा जाने गरेको पाइएको छ । अजुसा प्यासिफिक युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया–मेरेडको एक अध्ययनले सित्तैमा खाना खानकै…
जीवन के हो ? संसार मान्छेले सबै भन्दा धेरै जवाफ खोजेको प्रश्न नै यहि हुनु पर्छ । आदिमकालदेखि जब मानिसले बल्लतल्ल लेख्न पढ्न थाल्यो, त्यति बेला देखि अहिलेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्मको समयसम्म पनि यो प्रश्न उस्तै गरि चलिरहेको छ तर समानता भने एकै छ । यसको स्पष्ट जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । दार्शनिक अनुसार परिभाषा फरक । सन्दर्भ अनुसार निष्कर्ष फरक । यसैले आममानिसका लागि जीवनको परिभाषा खोज्नु लगभग उस्तै हुन्छ, जस्तो समुद्रको किनारमा त्यहि बालुबाको कण छान्नु जुन अघिल्लो पटक आउँदा आफुले छोएको होस् । लगभग असम्भव । वास्तवमा…
सफल कसरी बन्ने ? सामान्य मानिसहरुको जिन्दगीभरको चासो यहि हुन्छ तर धेरै मानिसहरु सफल हुनुलाई भाग्यको खेल वा चमत्कारका रुपमा मात्रै सम्झन्छन् । यस्तो सोचाइले उनीहरुको जिन्दगीबाट सफल हुने सम्भावनालाई पर पुर्याउँने मात्रै होइन, सफलता हाशिल गरेका मानिसहरुको जीवन र संघर्षको पनि बदनामी गर्छ । सफलता संयोग, चमत्कार वा भाग्यको खेल होइन । कुनै मानिसले आफ्नो उमेरको साह्रै लामो समय कुनै कामका लागि वा त्यसको जग तयार गर्नको लागि लगानी गरेको हुन्छ । त्यो समय बिचमा उसले असाध्यै धेरै कठिनाइ र अफ्ठ्यारो भोगेको हुन सक्छ तर अरुको लागि उसको भोगाइ…
विवाह चर्चामा छ जसमा एक दुलही जन्ती बोकेर विवाह गर्न दुलहाको घरमा पुगेकी छिन् । १९ वर्षीया खदिजा अख्तर खुसीले आफ्नो पाहुनाका लागि यस्तो गरेकी भने होइनन् ।खदिजाले बंगलादेशका सबै महिलाले उनको अनुसरण गर्लान् भन्ने आशाले यस्तो गरेकी हुन् । यो देशमा शताब्दिऔं देखि विवाहका लागि दुलहा दुलहीको घर जाने चलन छ । खदिजाले आफ्नो विवाहको घटना भाइरल भएको केही दिन पछि बीबीसी बंगालीसँग भनिन्, ‘यदि केटाले विवाह गरेर केटी ल्याउन सक्छ भने केटीले किन गर्न सक्दिनँ ?’ खदिजाले तारिकुल इस्लामसँग विवाह गरेकी छिन् । यद्यपि, यो घटनाले कतिलाई प्रेरित…
हास्ने बानी बसाउनुहोस्, अमुल्य खुशी मिल्छ !
हास्नु मानिसको प्राकृतिक स्वभाव हो । हास्न कुनै मुल्य लाग्दैन, बरु यसले करौडौं मुल्यको खुशी भने अवश्य दिन सक्छ । हासोले मानिस बोल्न नसक्ने कुरालाई समेत भाव बुझाउन सक्छ । मुस्कुराउनु, फिस्स हास्नु, रुञ्चे हासो हास्नु, अट्टहासले हास्नु हासोका विभिन्न प्रकारहरु हुन् । मानिसको अनुहारमा हासोले धेरै ठूलो महत्व राख्दछ । विशेषतः मानिस खुसी हुँदा, आफ्नो हितको कुरा पाउँदा, अडियो, भिडियो, फोटो हरेर, अक्षर पढेर वा विगत, वर्तमान र भबिष्य सम्झेर पनि मानिसहरु हास्ने गर्दछन् । हास्नु खुशी व्यक्त गर्ने माध्यम मात्र नभई एक प्रकारको उपचार पनि हो । हासोका…
साँढेले साढे २ लाखको मंगलसुत्र निलेपछ
विश्वमा भएका केहि घटनाले मानिसलाई अचम्भित बनाउने गर्दछ । जसलाई सुनेर हामी हैरान हुने गर्दछौ । भारतमा पोला पर्वको अवसरमा साँढेको पूजा गरिन्छ । उक्त पर्वमा साँढेलाई बिभिन्न परिकारहरु ख्वाएर सुनका गरगहनाले सजाउने गरिन्छ । तर भारतको महाराष्ट्रका एक परिवारलाई साँढेको पुजा निकै महंगो साबित भएको छ । भारतको महाराष्ट्रको अहमदनगरस्थित रायटे वाघापुर गाउमा एक महिलाले साँढेको पुजा गर्ने क्रममा करिब २ लाख पचास हजार रुपैयाँ बराबरको सुनको मंगलसुत्र लगाइदिइन् । सोहि बेला अचानक बिजुली गयो । बिजुली गएपछि उनी मैनबत्ती लिन घरभित्र पसिन् । त्यहि बेला साँढेले उनको मंगलसुत्र…
संसारकै अग्लो भवन बुर्ज खालिफामा नेपाली झण्डा फरफरायको देखियो एस्तो
काठमाडौं- विश्वकै अग्लो भवन बुर्ज खालिफामा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फरफराएको छ । नेपालको संविधान दिवसको अवसरमा बुर्ज खालिफामा नेपाली झण्डा फरफराइएको हो । यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालका अनुसार सरकारको अनुमतिमा १ मिनेटसम्म बुर्ज खलिफाको भवनमा नेपाली झण्डा फहराइएको हो । यूएईको स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार साँझ ९:१० (नेपाली समय १०:५५)बजे मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईस्थित संसारकै सबैभन्दा अग्लो भवनमा पहिलो पटक फहराइएको हो । संसारको अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपाली झण्डा फहराउँदा नेपाली पहिचान, नेपालले तय गरेको पर्यटन वर्ष २०२० लाई समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताए । बुर्ज…
एक अध्ययनले बताउछ: महिलाको स्तन* हेर्दा पाउनु हुने छ तपाईले यस्ता फाइदा
September 20, 2019 September 20, 2019 Purakhabar News
पुरुषहरु महिलाको कुन कुरामा बढी आकर्षित हुन्छन् भन्ने बिषय गरिएका विभिन्न अध्ययनहरुले पुरुषहरु महिलाको वक्षस्थल (स्तन) प्रति सबैभन्दा बढि आकषिर्त हुने तथ्य खुलेको छ। पुरुषहरुले महिलाका वक्षस्थलमा नजर घुमाउने अब नयाँ बहाना पाएका छन् । एक अध्ययनले दाबी गरेको छ ,की महिलाका वक्षस्थल हेर्नाले पुरुषहरुको आयु बढ्दछ । बेलायतको न्यू इंगल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा केही समयअघि छापिएको एक अनुसन्धानका अनुसार हरेकदिन लगभग १० मिनेट जति महिलाका वक्षस्थलमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपले नगर लगाउने पुरुषहरुको आयु ५ वर्ष सम्म बढ्ने जनाएको छ। जर्मनीमा गरिएको यो अध्ययनमा शोधकर्ताहरुले के दाबी गरेका छन् भने…
काठमाडौं । पछिल्लो समय विदेशीसँग बिहे गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि धेरै उमेर अन्तरमा विवाह गर्ने अधिक छन् । पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै २० वर्षभन्दा बढी अन्तरमा विदेशसीसँग झण्डै एक दर्जन विवाह भएको छ । त्यसरी बिहे गर्नेमा महिला बढी छन् । ५० वर्षमाथिका मात्रै १५ जनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विवाह गरेका छन् । जसमा २६ वर्षे युवतीले ५४ वर्षीय अमेरिकीसँग समेत बिवाह गरेकी छन् । अस्वाभाविक उमेर अनतरमा नेपालीहरूले कोरियाली, क्यानडेली, क्यानडेली, जर्जियालीसँग विवाह गरेका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिक छ ।